Zandarimariam-pirenena : Nitohy tany Betsiaka Ambilobe ny fidinana ifotony -
AccueilRaharaham-pirenenaZandarimariam-pirenena : Nitohy tany Betsiaka Ambilobe ny fidinana ifotony
07/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitohy hatrany ny fanaovana tomban’ezaka ny baiko sy ny toromarika napetraky ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, amin’ny famongorana ny tsy fandriam-pahalemana. Tany Betsiaka, Distrikan’Ambilobe, faritra Diana indray no nanaovana fidinana ifotony sy jery todika ny fampiharana ny paikady izay napetraka ny volana septambra lasa teo. Toa ny efa fanao sy mahazatra, dia nihaona sy nifampidinika tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana sy ny vahoaka tany an-toerana ireo iraka manokana izay notarihin’ny Jeneraly Mihia Jean Michel, “Coordinateur de l’Office de la Lutte Contre le Terrorisme”, sy ny Jeneraly Randriamanesy André, izay “Directeur de l’Organisation et de l’Emploi” avy ao amin’ny Foibem-pibaikoana ny zandarimaria. Tamin’izany no nilazan’ireo vahoaka fa nahatsapa ny vokatr’ireo paikady napetraka ireo izy ireo, ary niantraika mivantana tamin’ny fiainan’izy ireo andavanandro izany. Ankoatra izay, dia novoriana manokana ihany koa ireo zandary tany Betsiaka, izay fantatra fa efa manao ny “Système de prevention” ho fanatsarana sy fanamafisana ny fitandroana ny filaminana any an-toerana. Ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, izay efa manao ny ezaka rehetra hanakaikezana sy hamerenana ny fahatokisan’ireo vahoaka, dia manentana hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’izy ireo satria dia nahitam-bokany hatrany izany hatreto. Mbola hitohy any amin’ny faritra maro moa ny fitetezam-paritra hanaovana izay tomban’ezaka izay ihany.
Fikaonan-dohan’ny minisitra Frankôfôna:MIVERINA AMIN’NY LAONINY NY TOERAN’I MADAGASIKARA
At solmen va esser necessi far uniform lingues